छाँया अर्थतन्त्रले चलाएको देश - फ्री प्रेस नेपाल
टीकापुरमा राज्यले किन रोप्यो द्धन्द्धको फसल
एउटा पोस्टरले झस्किएको सत्ता र गोवध कानुनको अन्तर्य
हाम्रो शिक्षालय: काम नलाग्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने कारखाना
“राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा जुसदेखि जहाज बनाउने काम भैरहेकोछ ।” – डा.महावीर पुन
“शक्ति दुरुपयोग गरेको भन्दै स्थानीयबासी मिलेर उनको निर्माणाधीन घरमाथि आक्रमण”
फ्री प्रेस नेपालको खोजमाथि मार्टिन चौतारीमा ३१ जनवरीमा भएको छलफल
यसरी शुरु भो गरिवी
छाँया अर्थतन्त्रले चलाएको देश
by गजेन्द्र बुढाथोकी
१७ भाद्र २०७५, आईतवार १४:३६
in अर्थतन्त्र, भिडियो, युटुब भिडीयो, राजनीति
नेपालले अनौपचारिक समेत गरि १७ खर्ब ५० अर्ब बराबरको बस्तु आयात गर्छ । हाम्रो निर्यात ८२ अर्ब छ । रेमिट्यान्सबाट ९ खर्ब ८० अर्ब आईरहेकोछ । पर्यटन/सेवा आयबाट ७० अर्ब आर्जन भैरहेकोछ । बाँकी ६ खर्ब ९० अर्बको घाटा देशले कसरी पूर्ति गरिहेरहेकोछ भनेर हेर्ने हो भने देश छाँया अर्थतन्त्रले चलाईरहेको देखिन्छ ।
राजधानीको भित्तामा राखिएको समृद्दिको होर्डिङ्ग बोर्डहामी यति धेरै परनिर्भर भैसक्यौं कि हाम्रो उत्पादन के हो भन्ने नै ठम्याउन नसक्ने भैसक्यौं । मेरो भान्सामा पाक्ने चामलको बोरामा मेड ईन नेपाल लेखिएको स्टिकर टाँसिएको हुन्छ । तर मैले पाएको तथ्याँकले के भन्छ भने यो शतप्रतिशत नेपालमा उत्पादित चामल होईन । भारतमा उत्पादित चामल बैध अबैध तरिकाले भित्रयाईन्छ र यहाँ लेबलिङ गरिन्छ । यहाँ ल्याई भुस फालेर नेपालको कुनै मीलको नाममा प्याकेजिङ गरिन्छ ।
इन्डोनेशियाको दाल नभए मेरो भान्सा चल्दैन । भारतबाट प्याज आईदिएन भने हाम्रो तरकारी मिठो हुदैंन । चीनबाट लसुन र अदुवा आएन भने हाम्रो भान्सा पाक्दैंन । चिनिमा आत्मनिर्भर भैसक्यौ भन्छौं तर भारतबाट नल्याईकन चिया खान सक्ने अवस्थामा छैनौं । तेश्रो देशबाट ल्याएर चिया पिउनु परेकोछ ।
हाम्रो यो अवस्था आज भन्दा तीस चालिस बर्ष अगाडि थिएन । ७० को दशक सम्म नेपालले धान चामल निर्यात गथ्र्याे । नेपालको धान चामल टर्की सम्म जान्थ्यो । भारतको राजस्थान, विहार, उत्तरप्रदेशमा धानको उत्पादन राम्रो नहुँदा नेपालले निर्यात गथ्र्याे । अहिलेको पुस्तालाई अचम्म लाग्न सक्छ, नेपाल सरकारले धान चामल निर्यात कम्पनी दर्ता गरेरै निर्यात गथ्र्याे ।
त्यस्तो आत्मनिर्भर देश अहिले हामी बर्षको १ खर्ब ४० अर्बको कृषीजन्य बस्तु आयात गर्छौ । खसी, बोका देखि लिएर कुखुराको अण्डा सम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो परनिर्भरता यति धेरै बढेर गयो कि अहिले हाम्रो देशको ब्यापार घाटा झण्डै साढे एघार खर्ब रुपैया बराबरी पुग्यो । हामीले बर्षमा १२ खर्ब ४२ अर्ब बराबरको बस्तु आयात गर्दा मुश्किलले ८१ अर्ब रुपैया बराबरको बस्तु निर्यात गर्छौ । अर्थात हामीले ९४ रुपैया बराबरको बस्तु आयात गर्दा ६ रुपैया बराबरको बस्तु निर्यात गरिरहेको अवस्था छ ।
ब्यापार घाटाको यो दयनीय अवस्थाले हामीलाई दिनप्रतिदिन अरुप्रति आश्रित त बनाईरहेकोछ नै, साथै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान हुनबाट रोकेकोछ ।
यस्तो किन भयो
गाउँगाउँमा मान्छेका हातमा पुगेको पैसाका कारण आयातको मात्रा बढेको हो भनिन्छ । मैले विगत २० बर्षको हिसाब निकालेर हेरे । यो अवधिमा देशमा झण्डै ७० खर्ब बराबरीको रेमिट्यान्स भित्रिएको रहेछ । यो सानो रकम होईन । औपचारिक माध्यमबाट बर्षमा झण्डै ८ खर्ब बराबरको रेमिट्यान्स देशमा आउँछ । त्यहि पैसाको भरमा नेपालका बैंकहरुले बर्षमा १ अरब रुपैया नाफा गर्छन ।
अहिले हरेक ४ घर मध्ये एक घरको हातमा रेमिट्यान्सको रकम पुगेको तथ्याँक छ । यसलाई हामी ‘इजि मनी’ भन्छौं । तर कतारमा ५० डिग्री गर्मीमा फलाम बोक्नेहरुले यो मनि ‘ईजि ‘ तरिकाले आर्जन गरेकोे भने होईन । विदेशबाट हरेक दिन ३ वटा लाश बक्समा प्याक भएर आउँछ । हरेक महिना अंगभंग भएर आउनेहरुको संख्या १६ देखि १७ जनाको हाराहारीमा छ । रेमिट्यान्सको पैसावापत हामीले ठुलो मूल्य चुकाईरहेकाछौं ।
दुःखका साथ के भन्नुपर्छ भने गाउँमा पुगेको यत्रो पैसा बचत भैरहेकोछैन । अनुत्पादक बस्तुमा खर्च भैरहेकोछ । हामी त्यहाँबाट बिग्रन थाल्यौ । लत्ताकपडा, टिभी, मोबाईल जस्ता बस्तुमा खर्च गर्न थाल्यौ । एउटा नेपालीले अहिले प्रत्येक दिन मोबाईल कल गर्न औसत ४ रुपैया खर्च गर्दाे रहेछ । यसले एकातर्फ ब्यापार घाटा बढाईदियो भने अर्काेतर्फ मान्छेलाई अल्छी बनाईदियो । अहिले एउटा नेपालीले बर्षको १५ रुपैया बचत गरेको देखिन्छ । गत बर्ष यो दश रुपैया थियो । यो सन्तोषजनक होईन ।
मानिलिऊ तपाईको घरमा हजार रुपैया भित्रियो । त्यसलाई तान्न तपाईको घर वरीपरी ४ वटा पसल खुलेको हुन्छ । एउटा कस्मेटिक पसल हुन्छ । दोश्रो भट्टी खुल्छ । तेश्रो मोबाईल सम्बन्धि हुन्छ भने अर्काे किराना पसल खुल्छ । सबैभन्दा बढी ब्यापार रक्सी र मोबाईलले गर्छ ।
बिभिन्न स्किम ल्याएर तपाईको पैसा ति ब्यापारीले तान्छन् । प्रत्येक पसलमा अढाई सय रुपैया बराबरको खरीदारी गर्दा तपाईको हजार रुपैया सकियो । सय रुपैया लगानी गरेको ब्यापारीले तपाईंबाट डेढसय नाफा आर्जन गर्छ । यसरी बजारमा तपाईंको पैसा घुमिरहेकोछ । गौंडागौंडामा खुलेका पसल र ब्यापारले हाम्रो अर्थतन्त्र चलिरहेकोछ ।
अर्थतन्त्रमा उपभोगले पनि योगदान पुर्याउँछ । अमेरिकी अर्थतन्त्रको बिकासमा त्यहाँको ब्यक्तिले गर्ने उपभोगले योगदान पुर्याईरहेकोछ । अमेरिकी अर्थतन्त्रको मुख्य आधार नै त्यहि हो । जब उपभोग बढ्छ त्यसले उत्पादन बढाउँछ । तर हाम्रो मुख्य समस्या के भैदियो भने हाम्रोमा उपभोग बढ्दा आन्तरिक उत्पादन नै बढेको देखिएन । आयात मात्र ब्यापक रुपमा बढ्यो । अचम्म लाग्ला हामीले बार्षिक ३५ अर्ब रुपैया बराबरको श्रृँगारको सामग्री भित्रयाईरहेकाछौं । हाम्रो पैसा कता गैरहेकोछ भन्ने यसबाट पनि देखिन्छ ।
पैसाको अवमूल्यन बढ्ने डर
बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने हाम्रो तीन वटा श्रोत छन् । एउटा निर्यात । दोश्रो रेमिट्यान्स र तेश्रो पर्यटन अर्थात सेवाक्षेत्र । निर्यातबाट हामीले कमाउने भनेको एकासी बयासी अर्ब मात्र हो । पर्यटनबाट ६७ अर्ब बराबरी कमाईरहेकाछौं । ७ खर्ब ५५ अर्ब रुपैया रेमिट्यान्सबाट आर्जन भैरहेकोछ । यो तीनवटा जोड्दा नेपालले बार्षिक आर्जन गर्ने भनेको दश देखि एघार खर्ब मात्र हो ।
औपचारिक च्यानलबाट हुने ब्यापार अहिले १२ खर्ब ४२ अर्ब बराबरी पुग्यो । विभिन्न अध्ययनले के देखाएकोछ भने औपचारिक ब्यापारको ४० प्रतिशत थप अनौपचारिक तरिकाबाट कारोबार भैरहेकोछ । यो सबै जोड्दा १७ खर्ब ५० अर्ब बराबर कारोवार पुगेको देखिन्छ ।
नेपालले अनौपचारिक समेत गरि १७ खर्ब ५० अर्ब बराबरको बस्तु आयात गर्छ । हाम्रो निर्यात ८२ अर्ब छ । रेमिट्यान्सबाट ९ खर्ब ८० अर्ब आईरहेकोछ । पर्यटन/सेवा आयबाट ७० अर्ब आर्जन भैरहेकोछ । बाँकी ६ खर्ब ९० अर्बको घाटा देशले कसरी पूर्ति गरिहेरहेकोछ भनेर हेर्ने हो भने देश छाँया अर्थतन्त्रले चलाईरहेको डरलाग्दो अवस्था छ ।
स्वंय अर्थमन्त्री खतिवडाले देशको अर्थतन्त्रमा अनौपाचारिक अर्थतन्त्र हावी भएको भनेर चिन्ता ब्यक्त गर्दे हिंडिरहेकाछन् । अहिले औपचारिक बैंकिङ प्रणालीले समेटेका नेपालीको संख्या ४५ प्रतिशत मात्र छ । ५५ प्रतिशत नेपालीले सिरानीमुनी पैसा राखेर नगद कारोबार गरिरहेकाछन् । त्यो पैसा राष्ट्रिय लेखा तथ्याँकमा देखिदैन । यसरी हेर्दा हाम्रोमा छाँया अर्थतन्त्र कसरी हावी भएकोछ भन्ने थाहा हुन्छ ।
यो भनेको भयानक परनिर्भरताको सूचक हो । यदि भोलि कुनै प्रकारको बाह्य झटका आयो भने हाम्रो अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर संकट उत्पन्न हुने डर छ । त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्र कठिन मोडमा छ ।
हाम्रो एउटै मात्र श्रोत रेमिट्यान्समा निर्भरता छ । यदि कुनै कारणवश रेमिट्यान्स घट्ने अवस्था आयो भने हाम्रो अर्थतन्त्र डाँवाडोल हुने अवस्था छ । रेमिट्यान्स विस्तारै घट्दै गैरहेको पनि छ । अघिल्ला बर्षको तथ्याँक हेर्दा साढे चार देखि ५ लाख युवाहरु विदेश गएका देखिन्थे । विगत २ बर्षदेखि यो संख्या ३ देखि साढे तीन लाखमा झरेकोछ । बैदेशिक बजारमा हाम्रो पहुँच कम हुँदै गैरहेको देखिन्छ । जबकि हरेक बर्ष साढे पाँच लाख जति श्रम जनशक्ति बजारमा निस्किरहेकोछ । एकातर्फ यिनलाई आन्तरिक बजारमा खपत गर्न नसक्ने उता बैदेशिक रोजगारी पनि घट्दै जाने हो भने यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पार्छ ।
यो भनेको देशको लागि जोखिमपूर्ण र चुनौतीपूर्ण अवस्था हो । यस्तो डरलाग्दो निर्भरता कम गर्न बेलैमा सोचेनौं भने हामी आउँदा केहि बर्षभित्रै मुद्राको अवमूल्यन भई धराशायी हुने अवस्थामा पुग्न सक्छौं ।
मलाई सम्झना छ । बुवाआमाले सय रुपैया दिएर पठाउनु हुन्थ्यो । म चामल, दाल, तेल तरकारी किनेर २० किलोको झोला भरेर फर्कन्थे । अहिले मेरो छोरालाई हजार दिएर बजार पठाएँ भने उसले सानो प्लास्टिकको पोकामा ५ किलो सामान पनि ल्याउँदैन । यहि तरिकाले गयो भने मलाई के डर लागिरहेकोछ भने केहि अफ्रिकी मुलुकमा जस्तो नेपालमा पनि एक हजार भन्दा मुनिका नोट नै हराउनेछन् । दश बीस हजार र लाखका नोट बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । दश हजार लगेर तीनवटा अण्डा किनेर फर्कने अवस्था आयो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था कहाँ पुग्ला ?
हाम्रो आम्दानी कम छ, खर्च ज्यादा छ । त्यसैले अर्थतन्त्र कमजोर छ । यस्तो अर्थतन्त्रले भयानक मन्दीको बाटोतीर लैजान सक्दछ । दुर्घटना गराउन सक्दछ ।
हामी भन्दा पछि अर्थतन्त्रलाई खुल्ला गरेका र विकासका प्रक्रियामा अगाडि बढेका देशहरुको चर्चा गर्ने हो भने लाजै लाग्ने अवस्था छ । हाम्रो प्रतिब्यक्ति आय एक हजार डलर भन्दा कम छ । जककि विश्वकै गरिब क्षेत्रमा पर्ने अफ्रिकन केहि देशहरुकै पनि २४ देखि २५ सय डलर छ ।
हामीसंग सम्भावना नभएर गरीब भएको होईन । नेपाललाई अवसर उपलब्ध गराउने विश्वका दुई ठुला अर्थतन्त्र भएका छिमेकी देशहरु छन् । नब्बेको दशक पछाडि विश्व आर्थिक मन्चमा माथि उक्लिएको चीनलाई प्रतिब्यक्ति उपभोगको आधारमा विश्वकै ठुलो अर्थतन्त्र भनिन्छ । भारत चौथो ठुलो आर्थिक शक्ति बन्ने बाटोमा हिंडिरहेकोछ ।
एउटा देशले लगातार एक दशक जति दश प्रतिशत र अर्काेले ८ प्रतिशतले आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्यो । के भन्ने गरिन्छ भने तातो भाँडाको बीचमा चिसो भाँडो राखिदिए दुईतीरको तातो भाँडोले चिसो भाँडो त्यसै तातिन्छ । तर हाम्रो देश तातेन । यति हो, यसले अर्थतन्त्र धराशायी हुनबाट चाहिं बचाईरहेकोछ ।
के हामी यस्तै तरिकाले अगाडि बढिरहने हो त ? विगत दश बर्षको बृद्धिदर हेर्ने हो भने हाम्रो आर्थिक बृद्धिदर ५ प्रतिशत मुनी रहयो । त्यो पनि देशको लगानीले भएको होईन । औसतमा विकास खर्च भनेर डेढ देखि २ खर्ब छुट्याईन्थ्यो । त्यसको बढीमा ७५ प्रतिशत सम्म खर्च भएको देखिन्छ । बिकास खर्चका लागि जम्माजम्मी १ खर्ब लगानी गरियो । जब देशले विकासमा यति पैसा खर्च गर्छ भने अर्थतन्त्र कसरी माथि उठ्छ ?
अहिले बिकास खर्च ३ खर्ब छुयाईएकोछ । पहिला कुल बजेटको १६–१७ प्रतिशत मात्र हुन्थ्यो । अहिले कुल बजेटको २०–२२ प्रतिशत विकासका लागि छुट्याइएको देखिन्छ । तर यो पुर्ननिर्माणको खर्च समेत जोडेर हो । झट्ट हेर्दा बिकास खर्च बढेको जस्तो देखिएपनि अहिले पनि बिकासमा चानचुन डेढ खर्ब भन्दा बढी छुट्याईएको छैन । यस्तो बिकास खर्चको प्रवृत्तिले कसरी आउँछ समृद्धि ? कुखुरालाई चारो छर्ने यस्तो प्रवृत्तिको बजेटले हाम्रा विकास प्रक्रिया कहिल्यै अगाडि बढेन । सरकारले तोकेको ७ प्रतिशत माथिको स्थिर आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्न पनि ७ देखि ८ खर्ब जति बार्षिक लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
दुईटा बाटा छन् । पहिलो विश्व ब्यापार संगठनले दिएका केहि खुकुला प्रावधानहरुको फाईदा उठाउने । मानिलिऊ नेपालमा धान बढी उत्पादन भो । हाम्रो धानको मूल्य प्रतिमन १४ सय रुपैया पुगिरहेको बेलामा भारतीय बजारमा त्यहि धान ११ सयमा पाईयो रे । त्यसले हाम्रो धान उत्पादकलाई असर पार्ने भो । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले भारतको धानको आयात रोक्न सक्दछ । भारतले यो प्रावधानको पटकपटक प्रयोग गर्दे आएकोछ । अहिलेको खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा सधैंभरी आयातलाई निरुत्साहित गर्ने यो तरिकाबाट अर्थात आयात रोकेर म यहाँको उत्पादन बढाउँछु भनेर हुदैंन । तर तत्काललाई यो प्रावधानको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
अर्काे, हामीले उत्पादन नबढाई धरै छैन । अहिलेको अवस्थामा हामीसंग यस्तो कुनै उत्पादन छैन जसमा हामी आत्मनिर्भर हुन सकौं । अहिले नै सबै उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन्छौ भन्नु स्वैरकल्पना मात्र हो । त्यो संभव छैन । त्यसैले अन्तरनिर्भरता चाहिन्छ । हामीले गर्ने उत्पादन निर्यात गर्ने र नसक्ने बस्तुहरु आयात गर्ने । खास खास कृषीजन्य बस्तुहरुको छनौट गरि उत्पादन बढाउन प्रोत्साहनकारी योजनाहरु ल्याउने ।
यदि हामीले उत्पादन गर्ने बस्तु अन्य देशमा भन्दा कम लागतमा बन्न सक्छ भने त्यस्ता बस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन बढाउन थाल्नु पर्यो । जस्तो, चिया, कफी, गार्मेन्ट र कार्पेट जस्ता बस्तुहरुबाट तुलनात्मक लाभ लिन सक्छौं । यस्ता बस्तुको पहिचान गरौं । यस्तो काम हचुवाको भरमा हुदैंन । बृहत अध्ययन अनुसन्धान गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ । राज्यले बिशेष आर्थिक क्षेत्र छुट्याओस् । निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रहरु बनाओस् । यस्ता उत्पादनका लागि राज्यले निर्यात अनुदान दिने देखि लिएर अन्य संरक्षणकारी नीति लिईदिओस् ।
यी दुई बाटोबाट तत्काललाई परनिर्भरता कम गर्दे जान सक्छौं । ब्यापार घाटा कम गर्दे अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उपस्थिति बढाउन सक्छौं ।
तेश्रो उपाय पनि छ । हामी उपभोक्ताहरुले आफैलेपनि उपभोगको प्रवृत्तिमा परिवर्तन गरेर सहयोग गर्न सक्छौं । मैले घाँटी भरी सुन नलगाउँदा अलिकति देशको आयात कम हुन्छ । महँगा फोन ल्याएर उपभोग गर्न भन्दा अलिक सस्तो प्रयोग गर्दा त्यसले ब्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्छ भनि सोचिदिनु पर्यो । यस्ता उपभोग्य बस्तुहरुको उपभोग कम गर्न सक्यौं भनेपनि हामीले ब्यापार घाटालाई कम गर्न सक्छौं ।
अर्थतन्त्र नबुझेका नेतृत्व
नेपालका शीर्षस्थ नेतृत्वलाई अर्थतन्त्रबारे थाहा नै छैन । अहिले देशभर एक हजारको संख्यामा साँसदहरु छन् । त्यसको दश प्रतिशतपनि अर्थमामिलाका जानकार छैनन । केन्द्रिय संसदमा पनि बढीमा दश जना मात्र आर्थिक मामिला बुझ्ने साँसद छन् । अर्थतन्त्र नबुझेपछि उनीहरुसंग भिजन हुने कुरै भएन । विकास प्रक्रियालाई हेर्ने दृष्टिकोण हुने भएन ।
मैले मान्ने एकजना अध्ययनशील नेताले एउटा अन्र्तवार्तामा भनेकाथिए, ‘हाम्रा देशका शीर्ष नेताहरुमा अर्थ भनेको संसदबाट या मन्त्रालयबाट पाईने चेक वा आफुले पाउने चन्दा बाहेक केहि बुझाई छैन ।’ यो यथार्थ हो । चुनावी क्षेत्रमा पुल बनाएर विकासको दायित्व पूरा गरेको ठान्नेहरुको हालीमुहाली छ ।
संविधानमा हामीले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र लेखेकाछौं । तपाईले संविधान पढ्नु भो भने त्यहाँ १७ वटा कुरा भेटाउनुहुन्छ । अर्थतन्त्रबारे संविधानले नै अन्यौल बनाईदिएकोछ । आर्थिक नीतिमै हामी प्रष्ट छैनौ । तपाईलाई मुल बाटो नै थाहा छैन भने कसरी गन्तब्य पहिल्याउनु हुन्छ ? हामीले २००८ सालदेखि बजेट ल्याउन थाल्यौ । २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकास प्रणाली लागु गर्यौं । हाम्रो साढे सात दशकको यो विकास अभ्यासलाई प्याकेजमा हेर्नु भो भने हरेक पाँच बर्षमा आउने विकास योजनाको दृष्टिकोण फरक भेटाउनुहुन्छ ।
गफ के दिईन्छ भने २०४६ सालमा हामे अर्थतन्त्र १ खर्ब १५ अरब बराबर थियो अहिले ३० खर्बको पुग्यो । हामीले उपलब्धि हासिल गर्यौ । पहिला हाम्रो प्रतिब्यक्ति औसत आयु ४८ बर्ष थियो अहिले ७१ बर्ष पुग्यो । त्यसैले हामीले उपलब्धि हासिल गर्यौं । त्यसमा केहि विकासका सूचक थपिन्छ । शिक्षामा भर्ना दर ९७ प्रतितश पुग्यो। शुद्धखानेपानीको पाईप ९२ प्रतिशत पुग्यो । पक्की सडक १५ सय किलो मिटरबाट २५ हजार किमी पुग्यो ।
प्राकृतिक रुपमा हासिल भएका उपलब्धिहरु देखाउने यस्ता तथ्याँकले जनतालाई एक दुई दिन भ्रमित पार्ला तेश्रो दिन त तिनले बुझिहाल्छन् । अहिले देशको ४७ लाख भन्दा बढी जनसंख्या बाहिर छ । त्यसमध्ये १० लाख फर्किएर आायो भनेर मान्ने हो भनेपनि बाँकी त उतै छन् । तिनले त्यहाँको नियम कानुन र विकास देखेकाछन् । सडकको स्तर के हुनुपर्छ देखेर आएकाछन् । त्यहाँ पाउने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सुविधा देखेकाछन् । ४८ प्रतिशत जनसंख्या ईन्टरनेटको पहुचमा छ । युरोप अमेरीकाका हरेक सुचना मोबाईलमा उपलब्ध छ । साक्षर मान्छेले यूट्युवबाट विश्व चहारिरहेकोछ । त्यसैले अब हामी जनतालाई भ्रम नबाँडौं । ति धेरै अगाडि बढिसकेकाछन् ।
यो टेको लगाएर बनाएको अल्पमतको सरकार हैन । त्यसैले यसले सरुवा बढुवा नियुक्ति जस्ता झिनामसिना काममा भुल्नु भएन । यो प्राथमिकता हुदै होईन । सडक म आजै टाल्छु भोलि टाल्छु । यी खाल्डा मेरा पालामा बनेका होईनन भन्ने जस्ता हावादारी कुरा गरेर बस्नु भएन । सरकारका मन्त्री तहका मान्छे तरकारी बजारको अनुगमन गर्न जाने होईन ।
सरकार चुपचाप काम गरोस । बिज्ञहरुसंग सल्लाह मशविरा गरि आफ्नो आर्थिक नीति जारी गरोस । हामीकहाँ एकसेएक अर्थशास्त्री छन् । उनीहरुको सहयोग लिन सकिन्छ । आउँदो दश बर्ष भित्र के गर्ने भन्ने तथ्याँक र अनुसन्धानको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्यो । नेपाललाई प्रतिब्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्यउाँछु भनेर गफ दिने होईन । त्यो पुर्याउन के के गर्नुपर्छ निक्र्याेल गर्नुपर्यो । कुन कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्छ । कार्ययोजना सहितको दृष्टिकोण पत्र सार्वजनिक गर्नु पर्यो।
विकासको प्राथमिकीकरण गर्नैपर्छ । दशतीर बजेट छरेर देश कहिल्यै समृद्धिको बाटोमा लाग्दैन । अहिलेकै तरिकाले बजेट बाँड्ने र मन्त्रीले गोजीमा लगेर गएको बिकाश आयोजनाको भरमा सूची जारी गर्ने प्रवृत्तिले हुदैन । केन्द्रले एक बर्षमा ५ देखि १० वटा भन्दा बढी ठुला आयोजना बढाउनै हुदैंन । साना काम स्थानीय सरकारले गर्छन । आर्थिक उत्पादकत्व बढाउने र रोजगारी बढाउने आयोजनामा सरकारको ध्यान नगई हुदैन ।
अहिलेको प्रशासनतन्त्रले यी सब काम अगाडि बढाउने सामर्थ्य र ईच्छाशक्ति दुबै राख्दैन । एकजना जापानी अर्थशास्त्रीले भनेको सम्झन्छु । तिम्रा देशका प्रशासकहरु राणाले बनाइदिएको दरबारमा बस्छन् । त्यो दरबारमा उ जागिरेको रुपमा छिर्छ । निस्कदा उसले आफुलाई श्री ३ महाराज नै सम्झिरहेको हुन्छ । त्यो राणाकालीन निजामति क्षेत्रको मानसिकता र संरचनाबाट काम गरेर विकास सम्भव छैन । त्यसमा आमुल सुधार गर्नुपर्छ । यति गरे हाम्रो पराश्रित अर्थतन्त्रलाई सुधार्न सम्भव छ ।
(२४ बर्षदेखि बिकास र अर्थतन्त्रमाथि लेखिरहेका बुढाथोकी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट पुरस्कृत पत्रकार हुन् । )
Tags: Gazendra Budhathokiissue-1अंक-१गजेन्द्र बुढाथोकी
प्रहरी लापरवाहीले यादवको गयो ज्यान